Netherlands vs Ukraine Euro 2021 Amụma, Nsogbu na ịkụ nzọ Atụmatụ - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 11, 2021No Comments
Euro 2021 na-achọ ibidon’abalị iri na otu nke ọnwa Juun mgbe emesịrị na-egbu ogen’afọ gara agan’ihi ọrịa na-efe efe nke nwere nnukwu mmetụta na ndụ anyị niile.
Mgbe egwuregwu Turkey-Italy na June 11th, Netherlands ga-eche egwuregwu mbụ ya na Euro 2020 megide Ukraine na June 13.
Egwuregwu Netherlands-Ukraine ga-eme na June 13th na 9 PM CEST t Johan Cruyff Arena na Amsterdam.
A ga-egwu egwuregwu Netherlands Netherlands 2020 Group B ama egwuregwu a ma anyị ga-etinye nsogbu maka egwuregwu a t amụma anyị maka nsonaazụ yana usoro ndị e burun’amụma.
Yabụ ka anyị bido…
Formdị Netherlands, usoro nwere ike na Usoro
Frank de Boer, onye njikwa Netherlands, nwere arụmọrụ na-enyo enyo mgbe ọ na-elekọta klọb dị iche iche. O nwekwara nnukwu nkatọ banyere nhọrọ ndị otu ya maka ndị otu Netherlands nke gụnyere ịgbanwe ọtụtụ ndị egwuregwu.
Ma ọ nọgidere na-agbanwe agbanwe n’iji usoro 4-2-3-1 eme ihe. Ndị otu Netherlandsn’okpuru blunt de Boer na-egwu ụdị egwuregwu bọọlụ. Ndị otu Netherlands na-agba mbọ iwulite ọgụ na obere ọsọ ọsọ ga-agbaji iji chọta ma jiri ohere ndị mmegide ahụ mee ihe.
Frankie De Jong bụ isi ihe na atụmatụ a maka Netherlandsn’ihi t o nwere ikike ịkatọ na ịgbagha ndị na-agbachitere nke na-adọta han’ọnọdụ ma mepee ohere maka ndị otu ya iji ya.
Ọtụtụ mgbe, nkwado azụ na-anọ obosara ebe ndị na-agan’ihu / ihu na-agbadata iji mepụta ohere maka ijikọ.
Denzel Dumfries na-amalite mgbe niile dị ka rightback na Owen Wijndal dị afọ 21 yiri ka ọ ga-abụ nhọrọ mbụ aka ekpe. Enwere ike ịkpọ Patrick van Aanholt ka ọ kpọọ aka ekpe n’ihi ahụmịhe ya n’agbanyeghị.
Ọ bụ ezie na ejirila 4-2-3-1 mee ihe mgbe niilen’oge gara aga, Frank De Boer etinyela usoro ahụ ka ọ bụrụ usoro 5-3-2 nke yiri ka Dumfries na Wijndal na-eme ihe dị ka ndị na-awakpo nku ala.
Ntughari gaa azụ 3 website t ike ọ ga-abụ na enweghị Virgil van Dijk. Virgil Van Dijk nyere nkwado siri ike na azụ mana enweghị un ahapụwo etiti ahụ ka ọ na-enwekarị ọgụ website Id nku.
Na enweghị Virgil Van Dijk, Stefan De Vrij yiri ka ọ bụ onye mbụ ịhọrọ etiti. Onye njikwa ahụ yiri ka ọ na-enyekwu Jurriën Timber dị afọ iri na itoolu ma a họrọla ya karịa Matthijs de Ligt, yabụ ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ihe azụ two ma ọ bụ azụ 3 ga-adị.
Anyị na-atụ anya t azụ 3 nke Stefan De Vrij, Daley kpuru ìsì dị ka etiti etiti aka ekpe na Mathijs de lighting t Jurrien Timber na-asọ mpi maka ebe etiti nke atọ karịsịa ma ọ bụrụ na Netherlands t 3 na azụ.
Winjaldum bu onye kwesiri ntukwasi obi na midfield ma obu onye na-egwu egwu igbe. Ọ nwere ike igwu egwu dị ka onye na-egwu egwu d e 4-2-3-1 ma gbanwee ọnọdụ ya na Frankie p Jong iji mee ka ndị na-agbachitere ya nwee mgbagwoju anya, kpọọ dị ka igbe ọkpọ ọkpọ d e 3 nwoken’etiti ma ọ bụ kpọọ dị ka onye na-agbachitere nchebe.
Klassen bụ onye na-agbachitere onye na-eche nche mana dịka Winjaldum nwere ike ịgbanwe ọnọdụ un t Frankie De Jong.
N’egwuregwu taa, ndị otu na-elekwasị anya d e mmirin’ihu 3, mana Oranje nwere mmiri dịn’etiti 3, onye enwere ike ịkpọ oku ka o mee ihe ọ bụla ma ghagbuo ndị mmegide!
Mgbe oge magburu onwe un t Lyon gasịrị, Depay bụ onye ejirin’aka dị ka onye na-awakpo mbara. Ọ bụrụ na etinyere 5-3-2, anyị na-atụ anya ka ọ kpọkwuo egwu.
Wout Weghorst na-amalite mgbe niile na egwuregwu ndị na-adịbeghị anya na ọnọdụ okike un bụ nke onye egwu egwu nke nwere anya maka ihe mgbaru ọsọ, ya na Luuk De Jong ga-asọ mpi maka ọnọdụ a.
Ọ bụrụ na ndị Netherlands na-egwu egwu na ndị na-awakpo 3, mgbe ahụ anyị na-atụ anya ka Steven Berghuis dịka nke ọzọ na-agan’ihu. O nwedịrị ike ịmalite dị ka onye nke abụọ na-eti ihe n’akụkụ Depay na usoro 5-3-2.
Anyị na-ebu amụma usoro 5-3-2 maka egwuregwu Netherlands-Ukraine.
Maarten Stekelenburg, Owen Wijndal, Daley Blind, Stefan De Vrij, De Ligt, Dumfries, Frankie De Jong, Winjaldum, De Roon, Depay, Weghorst
Recentdị Netherlands Na-adịbeghị anya
Ndị Netherlands emeela egwuregwu 5n’afọ a. Ha tufuru egwuregwu mbụ 4-2 megide Turkey na asọmpi iko ụwa, merie egwuregwu two na-esote, dọta 2-2 megide scotland na June 2 eldest merie 3-0 Georgia. Enyere ihe mgbaru ọsọ 4 n’oge a ma nwee nnukwu ihe mgbaru ọsọ iri na isii.
Formdị Ukraine, usoro nwere ike na Usoro
Ukraine egosila ugboro abụọ t European Championship, na 2012 t 2016 adorable kụtuo han’otu egwuregwu.
Mana ekwesighi ka eleda Ukraine anya dabere na ihe gara aga ha. Ha tozuru otu ndị ha t European Qualifiers gụchara karịa Portugal na ebe ha nyere naanị goolu anọ. Naanị Belgium na Turkey ka e nyere obere goolu karịa Ukraine n’oge ntozu oke (goolu atọ).
Ukraine nọ ugbu a t 24th website FIFA.
Mgbe ụdị dị mma n’oge asọmpi Euro 2021, Ukraine nwere ụdị dị egwu. Ukraine meriri 6n’ime 8 egwuregwu na 2020 adorable dọta egwuregwu 4 mbụ ha na 2021. Mana ha meriri egwuregwu abụọ ikpeazụ ha gara aga bụ egwuregwu ọkụ maka Euro.
Onye njikwa Ukraine bụ onye egwu egwu lara ezumike nká Andriy Shevchenko bụ onye soro AC Milan na Chelsea gwuo egwu. Ọ na-jisiri ike otu kemgbe 2016 na-ekwusi ike na kenkwucha mgbanwe.
Na akọ, Ukraine na-egwu ọtụtụ dị ka Netherlands na obosara na-abịa website t nkwado zuru oke na ndị na-ebuso ndị na-ebuso agha agha na-egwu egwu.
Na 2021, Shevchenco nwere oke doro anya maka igwu sistemụ nwere etiti 3 n’etiti.
Serhiy Sydorchuk bụ onye mgbakwasị ụkwụ na-agbachitere onye na-agbachitere onwe un nke dị mkpa d e nchekwa d e nkwado nke a na-enye ohere Oleksandr Zinchenko dị afọ 24, onye na-egwuri egwu maka Manchester City na Ruslan Malinovskyi ka ha nwee ike ịwakpo ha.
Roman Yaremchuk gbara afọ iri abụọ na anọ bụ onye na-agbara ha ọsọn’ikuku ma nwee ike ijide bọọlụ ka ndị otu ya soro ya na mwakpo.
Achọpụtaghị Ukraine na ha nwere ike iwepụta ihe ịtụnanya na Euro 2020 nke bụ asọmpi juputara na ihe ịtụnanya. Mana ha enweghi otutu ndi egwu kpakpando nke nwere ike imebi ohere ha.
Edemede Ukraine maka Netherlands-Ukraine
Andriy Pyatov, Eduard Sobol, Vitaliy Mykolenko,, Illya Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Oleksandr Karavayev, Serhiy Sydorchuk, Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskyi, Zubkov, Yaremchuk
Netherlands vs Ukraine Amụma
Dịka anyị kwuburu na mbụ, otu abụọ ahụ na-egwu ụdị bọọlụ yiri nke a ma ọ bụ nke a ga-eme ka egwuregwu a bụrụ ihe ọchị ikiri! O yikarịrị ka Ukraine ọ ga-egwu un ka ọ dị mman’ihi na ha nwere ọtụtụ igosi. Ha abụọ nwere ndị na-eto eto na-awakpo un, un mere ọ ga-atọ ụtọ ịhụ otu esi aga.
N’agbanyeghị nke a, anyị anaghị ebu amụma ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ maka egwuregwu Netherlands-Ukraine Euro 2020.
Amụma anyị bụ na Netherlands ga-emeri 1-0 website t Depay.
Netherlands vs Ukraine Nsogbu
Netherlands nwere nsogbu 1.63 nke mmeri egwuregwu ebe Ukraine nwere nsogbu 6.0. Nke a pụtara na ndị na-eme akwụkwọ na-ebu amụma na mmeri dị mfe maka Netherlands n’asọmpi Euro 2020 a n’etiti Netherlands-Ukraine.
Netherlands-Ukraine Euro 2021 Atụmatụ ịkụ nzọ
Ọ bụrụ na ị gụọla akụkọ anyị na usoro ịkụ nzọ bọọlụ na ịkụ nzọ bọl bọọlụ ị ga-aghọta ihe kpatara anyị ji atụ aro ka ị ghara itinye nzọ dị mfe na Netherlands iji merie.
Ihe kpatara nke a dị mfe, nsogbu dịn’okpuru 2.0 na nke a pụtara na ọ bụghị ezigbo ego.
Anyị na-adụ ndị na-agba ume ka ha chọọ egwuregwu ebe otu egwuregwu abụọ nwere opekata mpe 2.0 ma ọ bụ karịa iji merie na otun’ime ndị egwuregwu bụ ọkacha mmasị doro anya.
Na egwuregwu dị ka nke a, anyị na-atụ aro ka ị nzọ na underdog. Mana dabere n’ụdị Ukraine, nke dara ogbenye nke a nwere ike ịbụ nhọrọ dị egwu. May nwere ike itinye obere nzọ nke ikwu $10 na Ukraine lee nloghachi 6x ma ọ bụ $60.
Ndụmọdụ ịkụ nzọ anyị maka egwuregwu a ga-abụ itinye nzọ na Depay iji nweta akaran’oge egwuregwu na Netherlands iji merie.
Anyị na-atụ aro itinye obere akụkụ nke ịkụ nzọ gị na Netherlands iji merie 1-0 na Depay iji akaran’ihi na nsogbu maka nsonaazụ a bụ oke 23.0. A nzọ $ 10 na nke a ga-enyere gị aka imeri $ 230!
Ọ bụrụn’ịchọrọ igwu egwu ọfụma, anyị ga-atụ aro ka ị nọrọn’ofe /n’okpuru ahịa have been goolu 1.5 na Netherlands iji merie.
Ọ bụrụ na ị ịkụ nzọ na ihe karịrị 1.5 ihe mgbaru ọsọ d e Netherlands iji merie nsogbu nke 2.0 na-enye ma ọ bụrụ na ị na-agbanye nan’okpuru ihe mgbaru ọsọ 1.5 na Netherlands iji merie, a na-enye nsogbu nke 5.0.